Ụdị iche iche | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ụdị iche iche
Ụdị udara ndị kasị atọ ụtọ
Ubi akwukwo osisi na-eme ọ bụghị naanị ọrụ na-amị mkpụrụ, kama ọ bụkwa ihe ịchọ mma. Osisi ndị a dị ike na-egbuke egbuke, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egbuke egbuke nke ọma na anyanwụ ma na-enwe obi ụtọ na anya nwere iche iche dị iche iche nke tomato site na odo odo odo, dịka oji. Eleghị anya ọ bụghị onye ọ bụla na-elekọta ubi maara na mma ebe ndịda a rutere Europe tupu oge anyị.
Kasị mma cherry tomato
A na-ewere n'ala nna nke tomato cherry dị ka South America, ma ọ bụ kama, mba Peru. Okwu cherry bụ nsụgharị nke okwu Bekee okwu cherry, nke pụtara "cherry". Tomato ndị a na-eme ka aha ahụ doo anya, ebe ọ bụ na ha dị obere karịa ụdị tomato dị iche. Mkpụrụ osisi ndị a dị ezigbo mma ma bụrụ ndị maara ubi anyị.
Winter-hardy na mkpụrụ: nkọwa na àgwà nke ụtọ udara iche "Fatezh"
Mgbe ụfọdụ ị naghị achọ ịzụta cherị (nnụnụ nnụnụ), n'ihi na ọ dịghị onye maara kpọmkwem ebe na n'ọnọdụ dị aṅaa ka mkpụrụ ndị a toro. Ya mere, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-achọ ụdị cherị ndị dị otú ahụ, nke nwere ike ịme ezigbo ihe ubi na mpaghara Moscow na mpaghara ndị ọzọ na etiti ọdịda anyanwụ. Ndị nlekọta na-elekọta nke a, n'oge na-adịbeghị anya a na-agba ụdị osisi ọhụrụ a - Frizh cherị.
Sweet Cherry "Ovstuzhenka": àgwà, pollinators, ihe omimi nke cultivation cultivation
Sweet Cherry "Ovstuzhenka" bụ nnọọ a ewu ewu dị iche iche. Nkọwa ya anaghị ahapụ ndị na-enweghị mmasị, dịka osisi ahụ nwere ezigbo mkpụrụ, ezigbo oge oyi na uto dị mma. Akụkọ banyere ozuzu "Ovchuzhenka" bụ ụdị dị iche iche nke udara dị ụtọ, bụ nke nwere mkpụrụ nke oge nhazi oge.
Chermashna Cherry: àgwà, pros na cons
Taa, ndị nwere mmasị na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-acha odo odo-acha odo odo cherị nwere ike ịnụ ụtọ uto na-agaghị echefu echefu nke ibe ha - odo tomato. E nwere ọtụtụ osisi mkpụrụ osisi odo, ya mere, anyị ga-atụle otu n'ime ndị kasị ewu ewu - Chermashna ụtọ cherry. Tụlee isi ihe dị iche iche nke eji megharịa ọnụ, ma chọpụta otú udiri a dị ụtọ si merie ọnọdụ nke ndị na-elekọta ubi.
Ahịhịa dị ụtọ bụ "Julia" bụ osisi toro ogologo nke nwere mkpụrụ osisi mara mma ma dị ụtọ, ọ na-ewu ewu n'etiti ndị na-elekọta ubi nke ugwu na mpaghara Black Earth. A na - enweta Yulia cultivar a na - ahọrọ ihe ubi na Rossosh (Voronezh mpaghara) site na mkpụrụ osisi Gin na - acha uhie uhie na - emepụta ihe na - eme ka e nwee pollination na cherish yellow Denissen.
Ụtọ udara dị iche iche "Valeriy Chkalov": njirimara
Ahịhịa dị ụtọ bụ otu n'ime mkpụrụ osisi tomato mbụ nke dị ogologo oge echere mgbe oyi gasịrị. Ma, ọ bụghị n'ógbè niile ọ na-amị mkpụrụ dị mma. Ya mere, ị kwesịrị ị na-akwụ ụgwọ akpan akpan anya na oyi-hardy iche ndị a tomato. Otu n'ime ndị nnọchianya nke ụdị a bụ Valery Chkalov, ezigbo udara. A na-enweta akụkọ banyere ozuzu ozuzu "Valery Chkalov" site na nhọpụta nke nnwere onwe na iri asaa nke narị afọ nke iri abụọ.